शहर प्लेट्सबर्ग प्रतिबन्ध खनन बिटकोइन र अन्य क्रिप्टोकुराँसी | ग्याजेट समाचार
क्रिप्टोकुरेन्सी ज्वरोको अन्त्य भएको छैन जस्तो देखिन्छ। धेरै प्रयोगकर्ताहरूले Bitcoin र अन्य डिजिटल मुद्राहरू खानी गर्न जारी राखेकाले। केहि समस्या हो जुन धेरै केसहरूमा समस्या र विवाद उत्पन्न गर्दैछ। न्यूयोर्क राज्यको प्लेट्सबर्ग शहर मा भएको छ। शहर क्रिप्टोकरन्सी खानीमा प्रतिबन्ध लगाउने पहिलो भएकोले।
नगर परिषदमा मतदान भैरहेको छ। मतदानमा भनिए, सर्वसम्मतिले, यो थियो अर्को १ months महिनाको लागि क्रिप्टोकरन्सी खनन निषेधित। यस निर्णयको लागि एक कारण यो प्रक्रिया बाहिर भइरहेको अत्यधिक उर्जा खपत हो।
मेयर आफैंको शब्दमा, कोलिन रिड, शहर संसारमा सबैभन्दा कम बिजुली दर हो। केहि चीज जसले बिटकोइन र अन्य मुद्राका खानीहरु लाई शहर लाई तिनीहरूको खनन केन्द्रको रूपमा प्रयोग गर्न हौसला प्रदान गर्दछ। पछि बिजुली लागत धेरै कम हुन्छ.
प्लेट्सबर्गको मामलामा प्रति किलोवाट hour. 4.5 सेन्ट भुक्तान गरिन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका मा औसत लगभग 10 सेन्ट छ। यो आधा भन्दा कम छ। थप रूपमा, शहर एक छ बिजुलीको सघन उपयोग गर्ने कम्पनीहरूका लागि विशेष मूल्य। यी अवस्थाहरूमा २ सेन्ट लिइन्छ। Bitcoin माइनरहरूले लाभ लिन चाहेको कुरा केहि।
वास्तवमा, सीoinmint Bitcoin खनन को लागी समर्पित कम्पनी हो र प्लेट्सबर्ग शहर मा बसोबास। जनवरी र फेब्रुअरी बीच कम्पनी छ शहरको कुल ऊर्जाको १०% खपत भयो। यस प्रक्रियाले खपत गर्ने ऊर्जाको ठूलो मात्राको नमूना। तसर्थ, नगर परिषदबाट उनीहरूले कारबाही गरे पछि बासिन्दाले उनीहरूको बिलमा मूल्य बढेको गुनासो गरे।
Bitcoin खनन को उपभोग दिएदेखि, शहरले खुला बजारमा बिजुली किन्नु पर्‍यो, जुन धेरै महँगो छ। सहरका बासिन्दाहरूको लागि अधिक महँगो बिलहरूको परिणामस्वरूप यस्तो भयो। तसर्थ, तिनीहरूले यो निर्णय लिन्छन् र Bitcoin र अन्य क्रिप्टो मुद्राको खनन रहन्छ अर्को १ months महिनाको लागि प्रतिबन्धित।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » प्रविधि » Criptomonedas » प्लेट्सबर्ग बिटकॉइन खानीमा प्रतिबन्ध लगाउन पहिलो शहर बन्छ
जनरल इलेक्ट्रिक उड्डयन विश्वको सबैभन्दा ठूलो एयरपोर्ट इञ्जिन के हुन्छ भनेर परीक्षण गर्न सफल हुन्छ
एमआईटी विश्वास गर्दछ कि आणविक फ्यूजन १ 15 बर्षमा मात्र तयार हुन सक्छ